श्रीमतीको ज्यान लिने पूर्वडिआइजीलाई लिन जेल पुगेकी यी महिला को हुन् ? – Sidha Onlinepatra
मुख्य पृष्ठ /News/श्रीमतीको ज्यान लिने पूर्वडिआइजीलाई लिन जेल पुगेकी यी महिला को हुन् ?
श्रीमतीको ज्यान लिने पूर्वडिआइजीलाई लिन जेल पुगेकी यी महिला को हुन् ?
काठमाडौं । आफ्नी श्रीमतीको ज्यान लिएको अभियोगमा जेल परेका सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडिआइजी रन्जन कोइराला आज जेलमुक्त भएका छन् । उनी ८ वर्ष ६ महिना कैद सजाय भुक्तान गरेर जेलमुक्त भएका हुन् । अहिले सामाजिक सञ्जालमा नेपालको न्याय प्रणालिको खुलेरै आलोचना भइरहेको छ ।
श्रीमतीको ज्यान लिएको अभियोगमा ८ वर्ष भन्दा लामो समय कारागार बसेका कोइराला हात हल्लाउँदै डिल्लीबजार कारागारबाट बाहिरिँदा उनलाई स्वागत गर्न पुग्नेहरुको लर्को पनि देखिएको थियो । ति मध्य एक महिला पनि थिइन्, जो अहिले सामाजिक सञ्जालमा एकदम चर्चित भएकी छिन् । ति महिला अरु कोही नभएर रन्जन कोइरालाकी प्रेमिका तारा रेग्मी हुन् ।
सर्वोच्च अदालतले १५ असारमा कोइरालाको सजाय घटाउँदै ८ वर्ष ६ महिना कायम गरेको थियो । श्रीमती गीता ढकालको ज्यान लिएको मुद्दामा जन्मकैदको सजाय पाएका थिए । तर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र तेजबहादुर केसीको इजलासले सजाय घटाउने फैसला गरेको हो ।janaboli
वैज्ञानिकहरुले फेला पारे कोरोनाभाइरसलाई शरीरमा फैलिनबाट रोक्ने एन्टिबडी